टीकापुर काण्डको पोस्टमार्टम
तीन वर्षअघि भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर सहरमा अनपेक्षित र अवाञ्छित घटना घटे । थारु आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक मुठभेडमा असंख्य थारु घाइते भए । आठजना प्रहरी मारिए । घटना घटेको एकाध घन्टापछि सुनसान र चकमन्न अवस्थामा रहस्यमय रूपमा एक बालक गोलीको सिकार भयो ।
दलितलाई आवासको हक
संसदमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका ३१ वटा मौलिक हकलाई सार्थक बनाउन विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता भइरहेका छन् । छलफल तथा संशोधनका लागि पिजनहोलमा राखिएका धेरै विधेयक पढेर धारणा बनाउन सांसदसंँग समय नहुन सक्छ ।
बत्तीका पुतली । यो एउटा नेपाली लोकोक्ति हो । यसले कुनै चिजमा आकर्षित भई फँस्नु वा त्यसमा फँसेर ज्यान गुमाउनु भन्ने बुझाउँछ । के साँच्चै बत्तीमा आएका पुतली फँसेकै हुन् त ? बत्तीमा किन पुतली या अन्य किरा आएका होलान् !
झापाको अर्जुनधारामा ९ वर्षकी एक बालिकालाई ७० वर्षका वृद्धले बलात्कार गरे । नवलपरासीको प्रतापपुरमा साढे तीन वर्षकी बालिकालाई एक किशोरले बलात्कार गरे ।
पशुजन्य पदार्थको माग बढ्दै गएको अवस्थामा व्यावसायिक पशुपालन पनि नेपालमा फस्टाउँदै गएको व्यवसाय हो । कृषिकर्मको पुरक व्यवसायको रूपमा अपनाइने निर्वाहमुखी पशुपालन हाल आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्ण व्यावसायिकतातिर अग्रसर भइरहेको छ ।
निराभगत थारु, कुमार अधिकारी
सबैले जिम्मेवारी इमानदारी र कुशलतापूर्वक बहन गरिदिने हो भने पुलिस प्रशासन लगायतका संयन्त्र चाहिँदैन । युटोपियनझैं लाग्ने त्यस्तो व्यवस्थालाई वामपन्थीले संक्षेपमा साम्यवाद भन्ने गर्छन् । तर त्यस्तो व्यवस्था अस्तित्वमा छैन । सबैले राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा त हुन्छ ।
रामराज शर्मा, गाेविन्द कार्की
काठमाडौंको महाराजगन्जमा गत साउन २७ गते इनार सफा गर्दा २ जनाको मृत्यु भयो । गत वैशाखमा डोल्पाको चिप्लेभिरमा सडक निर्माणका क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा उछिट्टिएको ढुङ्गाले लागेर दुई कामदारको मृत्यु भयो । गत साल मेलम्ची आयोजनाको पाइप बिछ्याउने ट्रेन्च खन्दा तीन जनाको ज्यान गयो ।
सर्पले मानिसलाई खोजी–खोजी डस्दैन । अन्जानवश कसैले टेक्न पुगे वा जिस्क्याए मात्र सर्पले खतरा महसुस गरी प्रतिरक्षाका लागि डस्ने हो । नेपालमा ८९ प्रजातिका सर्प फेला परेका छन् । तीमध्ये १७ प्रजातिका सर्पमात्र विषालु छन् । गोमन, राजगोमन, गनग्वारी (राजा सर्प), करेत, बाघे तथा हरेउ विषालु सर्प हुन् ।
घटना १ : संखुवासभाकी अजिता मगर (नाम परिवर्तित) १३ वर्षकी भइन् । कक्षा तीनमा पढ्दै गर्दा उनी एउटै घरमा भाडामा बस्ने ४० वर्षे पुरुषबाट २०७४ मंसिरमा बतात्कृत भइन् । डर र धम्कीका कारण उनले घटनाबारे तत्काल कसैलाई भन्न सकिनन् । २१ हप्ताको गर्भ भएपछि मात्रै एकाएक घरपरिवार र छरछिमेकले घटनाबारे थाहा पाए ।
गए साता युवाले औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । यस पंक्तिकार युवाका मनोभावना, इच्छा, आकांक्षा, दु:ख, सुख, पीडा, व्यथासँग नजिकैबाट परिचित छे । समृद्ध नेपालको नारा निकै जोडतोडले घन्किरहेको छ ।